"Isla Berri Ayaan Pogba Ku Bedelan Lahaa" - Roy Keane Oo Sheegay – Axadle
“Isla Berri Ayaan Pogba Ku Bedelan Lahaa” – Roy Keane Oo Sheegay
Halyeeyga kooxda Manchester United ee Roy Keane ayaa shaaca ka qaaday laba ciyaaryahan oo uu kooxdiisii hore u keeni lahaa suuqa xagaaga ee sanadkan si ay xilli ciyaareedka dambe ugu tartamaan horyaalka Premier League.
Labadaas xiddig ayaa kala ah mashiinka goolasha Tottenham ee Harry Kane iyo kabtanka Aston Villa ee Jack Grealish kaas oo uu sheegay inuu isla berri ku bedelan lahaa saxeexiisa Paul Pogba oo muhiim u ah Manchester United wakhtigan.
Keane ayaa Jammie Carragher oo ay Sky Sports activities wada fadhiyeen kaga soo horjeedsaday aragtida ah in Man United aysan suuqa xagaaga sanadkan u dhaqaaqi doonin saxeexa Grealish.
Roy ayaa yidhi “Labada ciyaaryahan ee aan ka fikiray dhawrkii toddobaad ee ugu dambeeyay ee aan filayo inay cajiib ku noqon doonaan Man United, waxaan dooran lahaa Harry Kane – waxkasta oo qiimihiisu yahay, sidoo kale waxaan dooran lahaa Jack Grealish”
“Waxa aan ku jecelahay Jack waxaan filayaa inay tahay inuu geesinimo ku dhex leeyahay garoonka, isagu waa mid cajiib ku ah meelaha cidhiidhiga ah, sanadkii ama labadii sano ee u dambeeyay, natiijadiisa dhammaystirku means horumartay, isagu waa ciyaaryahan cajiib ah”
“Berri ayaan Jack Grealish ku bedelan lahaa Pogba, dabcan haa (Method wada ciyaari karaan labadoodu) maxaa diidaya?”
“Waynu ognahay Kane goolal ayuu kuu damaanad-qaadi karaa, miyay adkaan doontaa in labadaas ciyaaryahan la helo? noloshaada ayaad ku sharad-tami kartaa inay adkaan doonaan laakiin Manchester United waa inay u dhaqaaqdo oo ay isku daydo inay hesho kuwa ugu wanaagsan haddii kale wada sheekaysigan oo kale ayumabynu sanadka dambe yeelan doonaa ee ah inay United ku dhawaatay”
Preview of Arsenal vs Villarreal: TV channel, prediction …
Paulo Fonseca leaves Roma at the tip of the season